म्यासाचुसेट्स (एमए) भाग्यशाली जीवनका लागि सोम, जुलाई २० नम्बर (परिणाम) | लटरी.कट
परिणाम > मैसाचुसेट्स > जीवनको लागि भाग्यशाली > 07-20-2020
सोमवार, जुलाई 20, 2020 म्यासाचुसेट्स लाइफ जीते नम्बर र परिणामहरूको लागि भाग्यशाली
तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ सोमबार, जुलाई १,, २०२० यस पृष्ठमा म्यासाचुसेट्स लकी फर लाइफ अफ लाइफका लागि विजयी नम्बरहरू। पछिल्लो लटरी जानकारीको साथ अद्यावधिक रहनको लागि, हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै पछाडि हेर्नुहोस् २०१ MA एमए भाग्य जीवन परिणामहरूका लागि
म्यासाचुसेट्स लोटरी खेलहरू
मेगाबक्स डबलर :10:०० अपराह्न EST १--6 देखि जैकपोट :11:०० अपराह्न EST बुधबार र शनिवार
मास क्यास :9:०० अपराह्न EST १--5 देखि शीर्ष पुरस्कार :10:०० अपराह्न EST दैनिक
नम्बर गेम मध्यान्ह :12:०० अपराह्न EST १--4 देखि शीर्ष पुरस्कार :12:०० अपराह्न EST दैनिक
नम्बर गेम साँझ :7:०० अपराह्न EST १--4 देखि शीर्ष पुरस्कार :7:०० अपराह्न EST दैनिक
म्यासाचुसेट्स लोटरी FAQ हरू
आज एमए लटरी कति हो?
तपाईं नयाँ एमआर लटरी ज्याकपॉट राशिहरू तपाईंको सबै मनपर्ने खेलहरूको लागि यहाँ लोटरी.कटमा पाउन सक्नुहुन्छ म्यासाचुसेट्स लॉटरी ज्याकपट्स पृष्ठ.
एमए लोटरी जित प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
१००,००० डलर सम्मका पुरस्कारहरू कुनै पनि आधिकारिक लटरी कार्यालयमा व्यक्तिमा संकलन गर्न सकिन्छ। डोर्चेस्टरको लटरी हेडक्वार्टरमा १०,००,००० डलर भन्दा धेरै पुरस्कार दावी गर्न आवश्यक छ र प्रक्रिया हुनको लागि लामो समय लाग्नेछ, दुई देखि तीन व्यापार दिन सम्म।
यदि मैले एमए लटरी जितें भने म करहरूमा कति तिर्ने छु?
$ 600 भन्दा बढीको पुरस्कारका लागि,%% राज्य करहरूको लागि रोकिएको छ। $5वा अधिकको पुरस्कारका लागि, संघीय कर होल्डिंग दर २ rate% छ र%% राज्य करहरूको लागि रोकिएको छ।
के म अज्ञात रहन सक्छु यदि मैले म्यासाचुसेट्समा लटरी जितें भने?
होईन, यद्यपि राज्यले जीतलाई ट्रस्टमा राख्न अनुमति दिन्छ र ट्रस्टको प्रतिनिधिले पैसा संकलन गर्न सक्षम हुन्छ, यसैले केही अज्ञातताको लागि अनुमति दिन्छ।
म म्यासाचुसेट्स लटरी टिकट अनलाइन किन्न सक्छु?
यस समयमा, एमए लटरी टिकटहरू एक अधिकृत खुद्रा विक्रेतामा खरीद गर्नु पर्छ।
म्यासाचुसेट्स लोटरीको बारेमा
सेप्टेम्बर २,, १ 27 .१ मा, म्यासाचुसेट्स जनरल कोर्टले जुवालाई कानुनीकरण गरे पछि म्यासाचुसेट्स लोटरी स्थापना भयो। पहिलो म्यासाचुसेट्स लोटरी टिकटहरू १ 1971 1972२ को अप्रिलमा बिक्रीमा थिए।
स्थापना भएदेखि नै, म्यासाचुसेट्स राज्य लटरीले १२$ बिलियन डलरभन्दा बढीको राजस्व ल्याएको छ र लगभग $ ० अर्ब डलर पुरस्कार प्रदान गरेको छ। कम्तिमा २$ अरब अमेरिकी डलर नाफा कम्नवेल्थमा प्रतिबन्धित स्थानीय सहयोगमा फिर्ता गरिएको छ। आज, एमए लटरी अमेरिकामा सब भन्दा सफल लोटरी मध्ये एक हो।
म्यासाचुसेट्स लोटरीको बारेमा अधिक जान्न कृपया अधिकारीको भ्रमण गर्नुहोस् वेबसाइट.